Mifantoha amin'i Jesosy - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2018-01 > Mifantoha amin'i Jesosy
Ry mpamaky malala
Mihazona fanontana vaovao amin'ny magazine "SUCCESSION" vaovao mitondra ny anarana "FOKUS JESUS" ianao. Ny mpitarika ny WKG (Worldwide Church of God Switzerland) dia nanapa-kevitra ny hamoaka ny azy manokana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny WKG (Alemana). Jesosy no ifantohantsika. Mijery ny sarin'ilay tovovavy eo amin'ny pejy eo aloha aho ary avelako ho voan'ny hafanam-pony. Tsy mijery ahy amin'ny masony mamirapiratra izy, fa mahita zavatra mahaliana azy tanteraka. Mety i JESOSY ve? Ity fanontaniana ity dia tian'Andriamanitra hotratrarina ao aminy, satria tiany ny hanome aingam-panahy ny olona tsirairay amin'ny fitiavany ary hanazava ny fiainana rehetra amin'ny hazavany. Sarobidy ianao ary tian'i Jesosy. Fa manantena anao koa ve izy? Ekeo ny fitiavany tsy misy fetrany!
Hita ao amin’ny Filazantsaran’i Jaona ny andinin-teny voalohany amin’ny lohatenin’ilay gazety hoe “JESOSY MIFANTSO”. 6,29: "Asan'Andriamanitra ny hinoanareo Izay nirahiny." Nandefa an’i Jesoa tety an-tany ny Tsitoha mba hamonjy antsika olombelona, ​​hanavotra antsika amin’ny fahotantsika, hiteny marina, hanasitrana, hananatra, hampahery ary hampionona. Te hiara-hiaina amintsika mandrakizay amin’ny fitiavana avy amin’ny fo izy. Inona no fanoloran-tenanao manokana amin’io fahasoavana io, io fanomezana tsy mendrika io? Ny mino an’i Jesosy, matoky Azy tanteraka, satria Izy no Mpamonjy ahy sy ho anao.
Ekeko: tsy afa-mamonjy ny tenako amin'ireo rehetra lazaina fa zava-bita tsara, sorona ary fanompoana fanompoana aho, satria miankina tanteraka amin'i Jesosy. Izy irery no mahavonjy ahy. Tsy matahotra ny hanaiky ny fanampiany aho mba hamonjeny azy. Tsapanao ve aho? Te hihaona amin'i Jesosy “eny amin'ny ranon'ny farihy” izy ireo. Raha vao mijery an’i Jesosy ianao dia manatona azy bebe kokoa. Raha vantany vao mifantoka amin'ny onjan-dàlambe marobe ianao dia toa milentika ao anaty rano. Jesosy manatona anao, voasintona ny tananao ary mitondra anao soa aman-tsara - miaraka aminao! Ny finoanao dia asan'Andriamanitra aminao.